ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ၁၉၅၀ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ
ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ သမိုင်းကြောင်းများ အပိုင်း (၄)
8 Jun 2018 . 10:12 AM
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီး အခက်အခဲပေါင်းများစွာရှိတဲ့ကြားကနေ ပြိုင်ပွဲကို ပြန်လည် ကျင်းပဖို့ ကြိုးပမ်းရာမှာ အိမ်ရှင်နိုင်ငံ ရွေးချယ်ဖို့တောင် ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ တတိယအကြိမ်မြောက် ပြိုင်ပွဲအပြီး (၁၂)နှစ်အကြာမှ ပြန်လည် ကျင်းပတဲ့ ပြိုင်ပွဲကို ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံမှာ ကျင်းပဖို့ ဖီဖာက ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး စစ်ဘေးဒဏ် အများဆုံးခံခဲ့ရတဲ့ ဥရောပနိုင်ငံအများစုကတော့ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်လိုခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။ အင်္ဂလန်အသင်း ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကို ပထမဆုံးအကြိမ် ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပြီး ပထမဆုံးအကြိမ် ချန်ပီယံဖြစ်ပြီး နောက်ထပ်ကျင်းပတဲ့ ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ ဥရုဂွေးအသင်းလည်း တစ်ကျော့ပြန် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ ခြေစစ်ပွဲတွေ ကစားပြီး အောင်မြင်လာတဲ့ အသင်းပေါင်း (၁၃)သင်းကို ပထမအကြိမ် ပြိုင်ပွဲတုန်းကလို (၄)သင်း (၁)အုပ်စု၊ (၃)သင်း (၃)အုပ်စုပုံစံနဲ့ ကျင်းပခဲ့ပြီး အုပ်စုဗိုလ်နေရာရ အသင်း (၄)သင်း အုပ်စုပတ်လည်ပုံစံနဲ့ နောက်တစ်ဆင့်ကို ကစားစေခဲ့ပါတယ်။
အိမ်ရှင် ဘရာဇီးလ်၊ စပိန်၊ ဆွီဒင်နဲ့ ဥရုဂွေးအသင်းတို့ နောက်တစ်ဆင့် တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီး အမှတ်အများဆုံးအသင်းဖြစ်တဲ့ ဥရုဂွေးအသင်းက အိမ်ရှင်ဘရာဇီးလ်အသင်းကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ချန်ပီယံဆုကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၅၀ ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပချိန်နဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကို စတင်ကျင်းပဖို့ ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ ဖီဖာဥက္ကဌ ဂျူးရီးမက်ရဲ့ ဥက္ကဌသက်တမ်း (၂၅)နှစ်ပြည့်ချိန်နဲ့ တိုက်ဆိုင်နေခဲ့လို့ ဂျူးရီးမက်ဖလားလို့ အမည်ပြောင်းလဲ ကျင်းပဖို့ ဖီဖာတာဝန်ရှိသူတွေက သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျင်းပပြီးစီးခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲ (၄)ကြိမ်မှာ ပရိသတ်အများဆုံး ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပြီး တစ်ပွဲပျှမ်းမျှ (၄၇၀၀၀)ကျော် လာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ သမိုင်းကြောင်းတွေကို ပြိုင်ပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့ နှစ်အလိုက် အပိုင်းဖြင့် နေ့စဉ်ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အပိုင်း (၅)ကို နောက်ရက်မှာ ဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် . . .
၁၉၅၀ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ အကျဉ်းချုပ်
Dates – 24 June – 16 July (23 days)
Teams – 13 (from3confederations)
Venue(s) –6(in6host cities)
Champions – Uruguay (2nd title)
Runners – Brazil
Third Place – Sweden
Goals Scored – 88 (4 per match)
Attendance – 1,045,246 (47,511 per match)
Top scorer(s) – Ademir – Brazil (8 goals)
Photo:Mirror, La Celeste Blog
ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲ သမိုငျးကွောငျးမြား အပိုငျး (၄)
ဒုတိယကမ်ဘာစဈအပွီး အခကျအခဲပေါငျးမြားစှာရှိတဲ့ကွားကနေ ပွိုငျပှဲကို ပွနျလညျ ကငျြးပဖို့ ကွိုးပမျးရာမှာ အိမျရှငျနိုငျငံ ရှေးခယျြဖို့တောငျ ခကျခဲခဲ့ပါတယျ။ တတိယအကွိမျမွောကျ ပွိုငျပှဲအပွီး (၁၂)နှဈအကွာမှ ပွနျလညျ ကငျြးပတဲ့ ပွိုငျပှဲကို ဘရာဇီးလျနိုငျငံမှာ ကငျြးပဖို့ ဖီဖာက ဆုံးဖွတျခဲ့ပွီး စဈဘေးဒဏျ အမြားဆုံးခံခဲ့ရတဲ့ ဥရောပနိုငျငံအမြားစုကတော့ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျလိုခွငျး မရှိခဲ့ပါဘူး။ အင်ျဂလနျအသငျး ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲကို ပထမဆုံးအကွိမျ ဝငျရောကျ ယှဉျပွိုငျခဲ့တဲ့ ပွိုငျပှဲဖွဈပွီး ပထမဆုံးအကွိမျ ခနျြပီယံဖွဈပွီး နောကျထပျကငျြးပတဲ့ ပွိုငျပှဲတှမှော ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျခွငျးမရှိတဲ့ ဥရုဂှေးအသငျးလညျး တဈကြော့ပွနျ ယှဉျပွိုငျခဲ့တဲ့ ပွိုငျပှဲဖွဈပါတယျ။ ခွစေဈပှဲတှေ ကစားပွီး အောငျမွငျလာတဲ့ အသငျးပေါငျး (၁၃)သငျးကို ပထမအကွိမျ ပွိုငျပှဲတုနျးကလို (၄)သငျး (၁)အုပျစု၊ (၃)သငျး (၃)အုပျစုပုံစံနဲ့ ကငျြးပခဲ့ပွီး အုပျစုဗိုလျနရောရ အသငျး (၄)သငျး အုပျစုပတျလညျပုံစံနဲ့ နောကျတဈဆငျ့ကို ကစားစခေဲ့ပါတယျ။
အိမျရှငျ ဘရာဇီးလျ၊ စပိနျ၊ ဆှီဒငျနဲ့ ဥရုဂှေးအသငျးတို့ နောကျတဈဆငျ့ တကျရောကျနိုငျခဲ့ပွီး အမှတျအမြားဆုံးအသငျးဖွဈတဲ့ ဥရုဂှေးအသငျးက အိမျရှငျဘရာဇီးလျအသငျးကို ကြျောဖွတျပွီး ဒုတိယအကွိမျမွောကျ ခနျြပီယံဆုကို ဆှတျခူးနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ၁၉၅၀ ပွိုငျပှဲ ကငျြးပခြိနျနဲ့ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲကို စတငျကငျြးပဖို့ ဦးဆောငျခဲ့တဲ့ ဖီဖာဥက်ကဌ ဂြူးရီးမကျရဲ့ ဥက်ကဌသကျတမျး (၂၅)နှဈပွညျ့ခြိနျနဲ့ တိုကျဆိုငျနခေဲ့လို့ ဂြူးရီးမကျဖလားလို့ အမညျပွောငျးလဲ ကငျြးပဖို့ ဖီဖာတာဝနျရှိသူတှကေ သတျမှတျခဲ့ပါတယျ။ ကငျြးပပွီးစီးခဲ့တဲ့ ပွိုငျပှဲ (၄)ကွိမျမှာ ပရိသတျအမြားဆုံး ကွညျ့ရှုခဲ့တဲ့ ပွိုငျပှဲအဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့ပွီး တဈပှဲပြှမျးမြှ (၄၇၀၀၀)ကြျော လာရောကျကွညျ့ရှုခဲ့ကွပါတယျ။ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲ သမိုငျးကွောငျးတှကေို ပွိုငျပှဲကငျြးပခဲ့တဲ့ နှဈအလိုကျ အပိုငျးဖွငျ့ နစေ့ဉျဖျောပွပေးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ အပိုငျး (၅)ကို နောကျရကျမှာ ဆကျလကျဖျောပွပေးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ . . .
၁၉၅၀ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲ အကဉျြးခြုပျ